नाम: पासवर्ड: मलाई सम्झना छ
आफ्नो पासवर्ड बिर्सिनुभयो? आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम भूल? खाता खोल्नुहोस्
उडान सिम्युलेटर एक्स (FSX) र स्टीम
FSX मौसम2वर्ष 8 महिना पहिले #854
तपाईंले प्राप्त धन्यवाद: 51
केही कारणको लागि, मेरो मा प्रत्यक्ष मौसम सुविधा FSX नराम्ररी गलत छ। गलत मात्र होईन, तर यथार्थमा कतै छैन, वा केहि एयरपोर्टहरूको लागि सहि। अहिले, युरोपका धेरै जसो एयरपोर्टहरू भारी हिउँको कारण ढिलाइको सामना गरिरहेका छन्।
बहिष्कारको लागि, ईएचएएम एम्स्टर्डम..सबै वास्तविक, मौसम हो:
उत्तरबाट पवन 16 किट
तापमान 1 ° C
दबाव 972 hPa
दृश्यता: 4000 मि
400 ft मा बिखरीका बादलहरू
700 फीट मा हिमपात
(हल्का) हिमपात अनाज
In FSX, तरिका फरक। खाली आकाश, फरक हावा र तातो .... के छ? के यसको वरिपरि कुनै बाटो छ?
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: luc57
FSX मौसम2वर्ष5महिना पहिले #941
को बक्स गरिएको संस्करणको लागि मौसम इन्जिन FSX JESPEN ले समर्थन गर्दैन जसले तपाईंलाई प्रत्यक्ष मौसम दिन्छ। म मान्दछु कि यो अझै स्टीम संस्करणका लागि हो प्रदान गर्नुहोस् डोभाटेलसँग उनीहरूसँग सम्झौता छ। सेवा डोभाटेलको लागि निःशुल्क छैन। जस्तो अहिले अहिले FSW सँग अझै सक्रिय मौसम इञ्जिन छैन वा तेस्रो पार्टी विकासकर्ता छैन जुन तपाईं खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तविक संसारको मौसमको लागि एक मात्र तरीका FSX बक्से संस्करण, एक सक्रिय स्काई 2016 जस्तै एक खरीद गर्न को लागी हो
अन्तिम सम्पादन: द्वारा DRCW.
FSX मौसम2वर्ष5महिना पहिले #1013
मैले एउटा निःशुल्क मौसम कार्यक्रम भेट्टाए - यो सानो हो र लाईभ मौसममा ईन्जेक्ट गर्दछ FSX - FSXWX
तपाईंले स्थापना गर्न आवश्यक छैन। चलाउनुहोस् FSXजब तपाईं भित्र हुनुहुन्छ WX प्रोग्राम FSX.
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: DRCW
FSX मौसम2वर्ष5महिना पहिले #1014
साइट पुग्न सकिएन ..... अनुवादमा, मृत लिङ्क।
FSX मौसम2वर्ष3महिना पहिले #1063
नमस्ते दारायसस्स्स्स्स् तपाईको मतलब के हो भनेर निश्चित छैन। लिंक अहिलेको लागि काम गरिरहेको छ जस्तो देखिन्छ।
हुनसक्छ यो एक, (जहाँ वास्तविक डाउनलोड भेट्टाउन सकिन्छ) .... www.plane-pics.de/fsxwx / ہدایات-fsx.htm
FSX मौसम2वर्ष3महिना पहिले #1064
त्यो लिंक मेरो लागि काम गर्दछ तर म सिफारिश गर्नेछु www.fsrealwx.net/
म यसको प्रयोग गर्दछु र यसले तपाईंलाई वास्तविक मौसम परिस्थिति दिन्छ। सबै समय।
तपाईं नि: शुल्क संस्करण प्रयोग गर्न वा प्रोमा स्तरवृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ।
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: goffers
बोर्ड श्रेणियाँ Rikoooo बारे - नयाँ सदस्यहरूलाई स्वागत छ - सुझाव बक्स घोषणा उडान अनुकरणहरू फोरम - उडान सिम्युलेटर २०२० (FS2020) - लाकहीड मार्टिन Prepar3D (P3D) - उडान सिम्युलेटर एक्स (FSX) र स्टीम - एफएस २०० - - उडानको शताब्दी - X-Plane मिडिया - स्क्रिनसटहरू भिडियोहरू हैंगर टक - सामान्य छलफल - फ्लाई टोनहरू - तपाई र आज कहाँ उडान गर्नुभयो? - रियल विमानन अन्य उडान सिमुलेटर - उडान गियर उडान सिमुलेटर - - फ्लाइट गियर बारे - DCS SERIES - बेंचमार्क सिम
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.185 सेकेन्ड